ဆွဲဆောင်မှု ရှိ တဲ့ အမူအရာလေး တွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ချစ်အား ပိုအောင် အထာ ကျကျ ပို့စ်ပေးနေတဲ့ အေးမြတ်သူ – Let Pan Daily
ဆွဲဆောင်မှု ရှိ တဲ့ အမူအရာလေး တွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေ ချစ်အား ပိုအောင် အထာ ကျကျ ပို့စ်ပေးနေတဲ့ အေးမြတ်သူ
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချော အေးမြတ်သူ ကတော့ အနုပညာလောက မှာ ပရိသတ်တွေ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရယူသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံးနဲ့ သဘာဝကျကျ ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေကြောင့်လည်း အကယ်ဒမီဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ အချိန်ထိ အေးမြတ်သူက နုပျိုနေဆဲ ဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေကတော့ ဆယ်ကျော်သက်တွေ အရှုံးပေးရလောက်ပါတယ်။ ယခုမှာဆိုရင်လည်း အေးမြတ်သူ က ပရိသတ်တွေ ချစ်အားပိုလောက်မယ့် ပုံရိပ်လေးတွေကို တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေထဲမှာတော့ အေးမြတ်သူက လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်ဝတ်စုံလေး နဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ အထာကျကျ ပို့စ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပုံလေးတွေ နဲ့လည်း အေးမြတ်သူ က “ဒီတစ်ခါ…ခပ်ဆိုးဆိုး အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ပါ……အမြဲတမ်းလိမ္မာနေတဲ့အခါ…..ဆိုးခွင့်မရတော့မှာ စိတ်ပူလို့…. ကိုယ် မင်းအချစ်တွေကိုယုံကြည်လို့…. တစ်ခါတစ်ရံခပ်ဆိုးဆိုးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လည်း…. ဖြစ်နေတတ်တယ်….. ခွင့်လွှတ်ပေးနော် ချစ်ရ သူတို့နဲ့ သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်ခဲ့ရင် လည်း…..ခွင့်ပြုပေးပါ.. ” ဆိုပြီး ရေးသားထားပါသေးတယ်။ ကဲ…ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ခပ်မိုက်မိုက် ပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလောက်အောင် ပို့စ်ပေးနေတဲ့ အေးမြတ်သူရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ မင္းသမီးေခ်ာ ေအးျမတ္သူ ကေတာ့ အႏုပညာေလာက မွာ ပရိသတ္ေတြ အားေပးခ်စ္ခင္မႈေတြကို ရယူသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္ပိုင္းကလည္း က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို အေကာင္းဆုံးနဲ႔ သဘာဝက်က် ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္တာကိုလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း အကယ္ဒမီဆုကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ အခ်ိန္ထိ ေအးျမတ္သူက ႏုပ်ိဳေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး သူမရဲ႕ ပင္ကိုယ္အလွတရားေတြကေတာ့ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြ အရႈံးေပးရေလာက္ပါတယ္။ ယခုမွာဆိုရင္လည္း ေအးျမတ္သူ က ပရိသတ္ေတြ ခ်စ္အားပိုေလာက္မယ့္ ပုံရိပ္ေလးေတြကို တင္ေပးလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီပုံေလးေတြထဲမွာေတာ့ ေအးျမတ္သူက လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ ဖက္ရွင္ဝတ္စုံေလး နဲ႔ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိ အထာက်က် ပို႔စ္ေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီပုံေလးေတြ နဲ႔လည္း ေအးျမတ္သူ က “ဒီတစ္ခါ…ခပ္ဆိုးဆိုး အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ပါ……အၿမဲတမ္းလိမၼာေနတဲ့အခါ…..ဆိုးခြင့္မရေတာ့မွာ စိတ္ပူလို႔…. ကိုယ္ မင္းအခ်စ္ေတြကိုယုံၾကည္လို႔…. တစ္ခါတစ္ရံခပ္ဆိုးဆိုးအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္လည္း…. ျဖစ္ေနတတ္တယ္….. ခြင့္လႊတ္ေပးေနာ္ ခ်စ္ရ သူတို႔နဲ႔ သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္ခဲ့ရင္ လည္း…..ခြင့္ျပဳေပးပါ.. ” ဆိုၿပီး ေရးသားထားပါေသးတယ္။ ကဲ…ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးေရ ခပ္မိုက္မိုက္ ပုံစံေလးနဲ႔ ခ်စ္စရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ပို႔စ္ေပးေနတဲ့ ေအးျမတ္သူရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
အမိုက်စား ဝတ်စုံလေး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အလှလေးကပေါ်လွင်နေကာ ဆယ်ကျော်သက်လေး လို နုပျို လှပနေ တဲ့ အိချောပို